မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Lee Min Ho and Park Min Young တကယ် စုံတွဲ ဖြစ်မဖြစ်?
Lee Min Ho and Park Min Young တကယ် စုံတွဲ ဖြစ်မဖြစ်?
"City Hunter" ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မင်းသားချော လီမင်ဟိုနဲ့ မင်းသမီးချော ပတ်(ခ်)မင်ယောင်း တို့ ၂ဦးဟာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအပြီး ဆက်လက်တွေ့ဆုံလည်ပတ်နေကြတာကို တွေ့ရှိတဲ့ ပရိတ်သတ်အချို့နဲ့ သတင်းထောက်တွေရဲ့ မေးမြန်းချက်များ အင်တာနက်မှာဓာတ်ပုံနှင့်တကွ ပျံ့နှံ့လာပြီးနောက် သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့မှာ သူတို့ ၂ယောက် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ခုလို ရင်းနှီးနေတာ (တနည်းအားဖြင့် ချစ်သူတွေဖြစ်နေတာ) ၁ လလောက်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း သူတို့ အေးဂျင့်တွေက ခုလို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်...
လီမင်ဟိုရဲ့ အေဂျင်စီ StarHaus Entertainment Agency က ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက "သူတို့ ၂ယောက် အလုပ်အတူတူလုပ်စဉ် အချိန်အတွင်း၊ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် စိတ်ဝင်မှုကို ခံစားလို့ ရခဲ့ပုံရပါတယ်... ခုဆိုရင် သူတို့ဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပိုနားလည်လာနိုင်တဲ့ အဆင့်ရောက်အောင် လေ့လာနေကြပါတယ်"Park Min Young ရဲ့ King Kong Entertainment Agency ကတော့ "သူတို့ ၂ယောက် ဒီရုပ်ရှင်ကားမှာ အတူတူ သူရုပ်ဆောင်တုန်းက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပေးအယူ အတော်လေး မျှပါတယ်.. ကြည့်ရတာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ရုပ်ရှင်ရိုက်နေတဲ့ အချိန်မှာ သံယောဇဉ်တွယ်ပြီး ဇာတ်ကား ရိုက်အပြီးမှာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် စိတ်ဝင်စားခဲ့ပုံရပါတယ်"
၂ဦး လုံးရဲ့ အေးဂျင့်တွေက "သူတို့ ၂ယောက် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် စတင်စိတ်ဝင်စားလာတာ ၁လလောက်တော့ ရှိပါပြီ... ကျန်တာကတော့ သူတို့တွေရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဖြစ်တာကြောင့် ဒီထက်ပိုပြီးတော့ မပြောကြားနိုင်ပါဘူး" လို့ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်...
ထိုအဖြေကို အင်တာနက်မှ ပရိတ်သတ်များနှင့် သတင်းထောက်များက သူတို့ ၂ယောက် ချစ်သူဖြစ်နေကြပြီဟု ယူဆပါတယ်... (ကျွန်မဆိုလဲ ယူဆမှာပဲ.. ဒါပေမဲ့လဲ relationship ဆိုတာ ရှုပ်ထွေးပါတယ်... ဒီတော့လဲ အပြစ်မပြောပါဘူး)... တချို့ကလဲ ၀မ်းသာကြသလို မင်းသားပရိတ်သတ်တချို့ကတော့ စိတ်မကောင်းကြပါဘူး... (မင်းသားရည်းစားရတာနဲ့ သူတို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်တာ နားမလည်နိုင်ပါဘူး... ဒီတစ်ယောက်နဲ့ မကြိုက်လဲ သူတို့ရမှာကျနေတာပါပဲ... ကျွန်မအတွက်ကတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့မင်းသား ပျော်ရင်ပြီးတာပါပဲ... တော်ပါသေးရဲ့ Boys over flower ထဲက မင်းသမီးကြီးနဲ့ မဟုတ်တာကိုပဲ ကျွန်မက ကျေနပ်လှပြီ... ဒီမင်းသမီးလေးနဲ့ လိုက်ဖက်တယ်လို့ ထင်တယ်)...
သို့သော် သြဂုတ်လ ၂၃ရက်နေ့မှာ လီမင်ဟိုရဲ့ အေဂျင်စီက သူတို့ ၂ယောက် ချစ်သူတွေ မဟုတ်သေးပါဘူးဆိုတာကို သတိရှိရှိ ပြန်လည် ငြင်းဆန်လိုက်ပါတယ်... ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက "သူတို့၂ယောက် သိတာ တော်တော်လေးကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ခုဆိုရင် သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်နေကြပါပြီ... City Hunter ဇာတ်ကားအပြီးမှာ သူတို့ ၂ယောက် အပြင်မှာ တွေ့ဖြစ်ကြပါတယ်... ဒါကို ချိန်းတွေ့တယ်လို့ ပြောဖို့ ခက်ပါတယ်... သူတို့၂ယောက် ခုမှ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် စိတ်ဝင်စားရုံပဲရှိပါသေးတယ်... တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက် ပိုသိတဲ့အချိန်ကျမှ သူတို့တွေ ချစ်သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်... ဒါကြောင့် သူတို့ ချစ်သူတွေဖြစ်နေပြီဆိုတာကို ပြောဖို့ စောပါသေးတယ်... သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီထက်ပိုပြီး ကျွန်တော်တို့ မပြောချင်တော့ပါဘူး..." လို့ ပြောကြား ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်...
ကျွန်မအတွက်တော့ ဘယ်မင်းသား၊ မင်းသမီး ရည်းစားရသွားပြီ ကြိုက်နေကြပြီဆိုတာက သတင်းအချက်အလက်တစ်ခု အနေနဲ့ စိတ်ဝင်စားလို့ ဖတ်တာလောက်ပဲရှိပါတယ်... မင်းသားရည်းစားရလို့ အသဲကွဲတာတို့ မင်းသမီးကို မုန်းတဲ့ ပရိတ်သတ်များလာတာတို့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး... အဲဒိမင်းသမီးနဲ့ မကြိုက်လဲ သူက ကိုယ့်လာကြိုက်မှာမှ မဟုတ်တာ... ၂ဦး ၂ဖက်ကျေနပ်နေရင်ပြီးတာပါပဲ... အဓိကက ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ မင်းသား မင်းသမီး ပျော်ရင်ပြီးတာပါပဲ... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ ၂ယောက်က ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ မင်းသား မင်းသမီးဖြစ်တာတစ်ကြောင်း .. အသက်အရွယ်မတိမ်းမရိမ်းနဲ့ ၂ယောက်လုံးကို လိုက်ဖက်တာတစ်ကြောင်းကြောင့် ကျွန်မကတော့ သူတို့ တစ်ကယ်ကြိုက်မယ်ဆိုရင် သူတို့အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်လို့.... သတင်းကို သိတာ ၁လကျော်နေပင်မဲ့ မအားလို့ မတင်ဖြစ်တာ... ခုမှ တင်ဖြစ်တော့ သိတဲ့သူတွေတောင် တော်တော်များနေလောက်ပြီ...
Posted by mabaydar at 4:44 PM
ဂျင် ကစားမလို့ (သို့) စကာင်္ပူရောက် အလွဲများ ၁၁
David Archuleta ပရိတ်သတ်တွေအတွက်
ရုံး cubical လေးကို Jang Keun Suk calender နဲ့ အလှ...
Interview with Real Steel Child star Dakota Goyo
Shooting Starလေး လက်သည်းပေါ် ဆိုးကြရအောင်
Lee Min Ho and Park Min Young တကယ် စုံတွဲ ဖြစ်မဖြစ...